एमाले बन्नु भनेकै मुलुक बन्नु हो - Sajhamanch
२०७८, मंसिर ११ गते बिहानिको ११:०९:०५ बजे Saturday 27th November 2021
November 22, 2021 7:53 pm घनश्याम भुसाल
महाधिवेशनको व्यवस्थापकीय तयारीको कुरा गर्दा सबैले बुझ्छन् कि एमालेले आफ्नो काम चुस्त ढङ्गले गर्छ । व्यवस्थित ढङ्गले गर्छ, समयसारिणी बनाएर गर्छ । हामी दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको संघारमा छौं र आवश्यक तयारीको काम दैनिकरुपमा परिणाममुखी गरिरहेका छौं । राजनीतिक अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दै अघि बढ्दा जहाँ पनि समस्या समाधान हुन्छ । विश्वको राजनीतिक अभ्यास पनि यही हो । तर हाम्रो राजनीतिक कुरा गर्दा २००७, २०४६ को आन्दोलनले राजनीतिलाई व्यवस्थित गर्न सकेन । २०७२ मा आएर एक किसिमको राजनीतिक ‘सेटलमेन्ट’ भयो । संवैधानिक हिसावले जनक्रान्ति संस्थागत भएको छ । राजनीतिकरुपले संस्थागत गर्नेक्रममा हामी अझै छौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एक भइरहको भए यो ‘सेटलमेन्ट’ हुन्थ्यो । किनभने, जनतामा विश्वास पलाएको थियो । तर फुटपछि पुनः जनतामा निराशा आएकै हो । देश फेरि राजनीतिक अस्थिरतामा जाने भयो, मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व नहुने भयो भन्ने चिन्ता भयो । यही निराशा र जिज्ञासा सम्बोधन गर्नु अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको चुनौति हो ।
देश चलाउन पार्टी विचारधारात्मकरुपले पनि प्रष्ट हुनुपर्छ । हरेक महाधिवेशनबाट एक पाइला सुनिश्चित गर्न सक्यौं भने समाजवादसम्म पुग्न सजिलो हुन्छ । यो महाधिवेशनले पनि त्यो सन्देश दिन सक्नुपर्छ । महाधिवेशनमा निर्वाचनलाई नै सम्पूर्ण चिज हो भनेर मान्नु हुँदैन । निर्वाचन एउटा प्रक्रिया हो तर यो समग्रतामा सबै चिज होइन । जनताको मुद्दा समाधानमा ध्यान दिनुपर्छ । हामी अगाडि बढ्दैछौं, बढ्छौं भनेर सुनिश्चित गर्न सक्नु पनि सफलता हो । राजनीतिक दल मुलतः जनताका लागि काम गर्ने निकाय हो, त्यसैले जनताको मुद्दामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नैपर्छ । काम गर्दै जानुपर्छ, हिजोभन्दा आज राम्रो गर्न सकेका छौं कि छैनौं, समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ । एकता व्यक्तिमा होइन, विधिमा सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ । तबमात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । व्यक्ति आज छ भोलि छैन, तर विधि स्थापित गर्न सक्यौं भने त्यो पछिसम्म काम लाग्छ । एमालेले गर्न खोजेको अहिले यही हो । यो महाधिवेशनले त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । उसो त विधान महाधिवेशनले धेरै काम गरिसकेको छ । बाँकी काम थप गर्दै जानुपर्छ ।
एमाले मुख्यतः लोकतान्त्रिक हिसाबले एकतावद्ध हुन सक्नुपर्छ, त्यो भनेको विधिमा एकता र सर्वस्वीकार्यता हो । पार्टीमा व्यक्ति गौण विषय हो, विधि प्रधान विषय भएकाले हामी सबैको ध्यान त्यसमा जानुपर्छ ।
संगठित एमाले हुन धेरै समय लाग्यो । हिजोका दिनमा हामी कोही कता थियौं, कोही कता । आज एमालेको छातामुनी गोलबद्ध छौं । अझ गोलबद्ध हुनेक्रम जारी छ, रहिरहन्छ । एमालेलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौं भने मुलुक चलाउन एमाले पर्याप्त छ । हामीभित्र कमजोरी छन् भने हामीले त्यो काम गर्न सक्दैनौं । इतिहासका शिक्षा र कमजोरीबाट सिक्दै एमाले अघि बढ्नुको विकल्प छैन । रुपान्तरणको आन्दोलनप्रति सबैको प्रतिवद्धता हुनुपर्छ, त्यो ममा पनि हुनुपर्छ । पद गौण कुरा हो । यसको अर्थ पद नै राख्नु हुन्न भन्ने होइन । तर सबैलाई पदमा राख्न पनि सकिँदैन । पदमा रहेर वा नरहेर देश र जनताको पक्षमा कटिवद्ध भएर काम गर्न सकिन्छ ।
एमालेको नेता हुनका लागि के योग्यता चाहिन्छ ? त्यो मापदण्ड बनाऔंँ । त्यो मापदण्डमा पर्ने स्वतः नेता हुने विधि बस्छ । महाधिवेशनबाट हामीले दिनसक्ने एउटा सन्देश यो पनि हो । यसले पार्टीलाई बढी लोकतान्त्रिक बनाउन सहयोग गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । के हामी त्यसो गर्न तयार छौं ? तर तयार हुनैपर्छ । एउटा मापदण्ड नहुने हो भने पार्टीभित्र पदका लागि झमेला जहिले रहिरहन्छ । र, यो झमेलाले पार्टीलाई लोकतान्त्रिक होइन अलोकतान्त्रिक बनाउँछ । हामी सबैले यसमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले हाम्रो अगाडि दशौं महाधिवेशन आइसक्यो । महाधिवेशनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न लाग्नुछ । महाधिवेशनबाट साँच्चै एकतावद्ध एमालेको सन्देश दिनुपर्छ । यही आजको आवश्यकता हो । (नवयुगबाट)
उपमहासचिव, नेकपा (एमाले)
November 22, 2021 7:53 pm | मुख्य समाचार,राजनीति,विचार/ब्लग